साइम्बल्टा बनाम लेक्साप्रो: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस कम्पनी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य समुदाय घरपालुवा जनावर कल्याण मनोरञ्जन समाचार स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट भारी खेल
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> साइम्बल्टा बनाम लेक्साप्रो: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो दुईवटा औषधी हो जुन प्राय जसो दुबै प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर (MDD) र सामान्यीकृत चिन्ता डिसऑर्डर (GAD) को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रमुख अवसादग्रस्त विकार हो अनुमान गर्न को लागी संयुक्त राज्य अमेरिका मा करीव १ million लाख वयस्क। यो कम्तिमा दुई हप्ता अवधिको लागि कम मुडको द्वारा विशेषता हो। बिरामीहरूले गतिविधिमा उनीहरूको चासो हराएको पनि देखाउन सक्छन् सामान्यतया तिनीहरूको रमाईलो वा कम ऊर्जा। केही बिरामीहरूले कुनै ज्ञात कारण बिना दुखाई अनुभव गर्छन्।
सामान्यीकृत चिन्ता विकार हो अनुमान गर्न को लागी संयुक्त राज्य अमेरिकामा 8.8 मिलियन वयस्कहरू। यो पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, र काम सहित विभिन्न मुद्दाहरूको बारेमा अत्यधिक चिन्ता द्वारा विशेषता हो। एक पटक रोगीहरूले यो चिन्ता एक दिनमा कम्तिमा छ महिना भन्दा बढीमा प्रदर्शन गर्दछन् जब यो निदान हुन्छ।
जबकि सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो दुबै यी परिस्थितिहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ र अन्य धेरै, त्यहाँ दुई औषधीहरू बीचमा केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्।
सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो बीचको मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
साइम्बाल्टा (ड्युलोक्सेटीन) एक पर्चेको औषधि हो जुन दुबै MDD र GAD को उपचारमा संकेत गरिएको छ। सिम्बल्टा एन्टीडिप्रेससन्ट्सको समूहसँग सम्बन्धित छन जुन सेलेक्टिभ सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन रिउपटेक इनहिबिटरहरू (SNRIs) को रूपमा चिनिन्छ। न्युरोन सिनप्सेमा, साइम्बाल्टाले नोरिपाइनफ्रिन र सेरोटोनिन दुबैको पुनःअपटेक रोक्दछ। यसले न्युरोट्रान्समिटरहरूलाई सजिलैसँग मिजास र प्रभावमा सकारात्मक भूमिका खेल्नको लागि छोड्दछ। अन्य SNRI हरू जसलाई तपाई परिचित हुन सक्नुहुनेछ एफेक्सोर (भेन्लाफैक्साइन) र प्रिस्टिक (डेसेन्फ्लेक्साइन) हुन्।
सिम्बल्टा २० मिलिग्राम, mg० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्राम मौखिक क्याप्सूलको रूपमा उपलब्ध छ।
लेक्साप्रो (एसिटालोप्राम) एक पर्चेको औषधी हो जुन दुबै MDD र GAD को उपचारमा संकेत गरिएको छ। लेक्साप्रो एन्टिडिप्रेसन्ट्सको समूहसँग सम्बन्धित छन जुन सेलेक्टिभ सेरोटोनिन रिउपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई) को रूपमा चिनिन्छ। लेक्साप्रो न्यूरोनल झिल्ली यातायात पम्पमा सेरोटोनिनको पुनःअपटेक ब्लक गरेर काम गर्दछ। यो कार्यले न्युरोन सिनप्सेमा अधिक नि: शुल्क सेरोटोनिन प्रभावी रूपमा छोडिन्छ। अन्य एसएसआरआईहरू जससँग तपाई परिचित हुन सक्नुहुन्छ त्यसमा प्रोजाक, जोलोफ्ट, सेलेक्सा, वा प्याक्सिल समावेश छ।
लेक्साप्रो मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, र २० मिलीग्राम। यो mg मिलीग्राम / m मिलि एकाग्रतामा मौखिक समाधानको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
कसरी एक खमीर संक्रमण बाट छिटो छुटकारा पाउन
Cymbalta र Lexapro बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग चयनित सेरोटोनिन-नोरपिनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधक चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता
जेनेरिक नाम के हो? Duloxetine Escitalopram
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक क्याप्सूल मौखिक ट्याब्लेट र मौखिक समाधान
मानक खुराक के हो? Mg० मिलीग्राम प्रति दिन एक पटक प्रति दिन १० मिलीग्राम
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? दीर्घ-अवधि (महिना देखि वर्ष) दीर्घ-अवधि (महिना देखि वर्ष)
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? किशोर र वयस्कहरू किशोर र वयस्कहरू
शर्तहरू Cymbalta र Lexapro द्वारा उपचार
पहिले उल्लेख गरिएझैं सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो दुबै दुबै प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर र सामान्यीकृत चिन्ता डिसअर्डरको उपचारको लागि संकेत गरीएको छ। सिम्बल्टा न्यूरोपैथिक र मस्कुलोस्केलेटल दर्दसँग सम्बन्धित केहि अद्वितीय संकेतहरूको लागि अनुमोदित छ। यी संकेतहरूले सिम्बाल्टालाई अन्य एन्टीडिप्रेसस औषधिहरू भन्दा अलग सेट गरे किनभने यो एक मात्र पीडा सम्बन्धित निदानमा अनुमोदित हो। लेक्साप्रो कहिले काँही अफसेट-लेबलको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन बाध्यकारी बाध्यकारी विकार, बुलीमिया नर्भोसा, र द्वि घातुमान खानेको रूपमा हुन्छ।
तलको चार्टले सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो द्वारा उपचार गरिएको सर्तहरूको सूची प्रदान गर्दछ। यसले सबै सम्भावित प्रयोगहरू समावेश नगर्न सक्छ, र तपाईं सधैं आफ्नो हेल्थकेयर प्रोफेशनलसँग परामर्श लिनु पर्छ यी औषधिहरू मध्ये कुनै एक तपाईंको लागि सही हो कि भनेर हेर्नका लागि।
सर्त सिम्बल्टा लेक्साप्रो
सामान्यीकृत चिन्ता विकार हो हो
फाइब्रोमायाल्जिया हो हैन
दीर्घकालीन मस्कुलोस्केलेटल दुखाई हो हैन
न्यूरोपैथिक पीडा मधुमेह मेलिटसको साथ सम्बन्धित हो हैन
केमोथेरापी प्रेरित परिधीय न्यूरोपेथी अफ-लेबल हैन
तनाव मूत्र असंयम (पुरुष) अफ-लेबल हैन
द्वि घातुमान खाने डिसअर्डर हैन अफ-लेबल
बुलीमिया नर्भोसा हैन अफ-लेबल
जुनूनी बाध्यकारी विकार हैन अफ-लेबल
आतंक विकार हैन अफ-लेबल
पोस्टट्रममैटिक तनाव डिसआर्डर हैन अफ-लेबल
मासिकपूर्व डिस्फोरिक डिसअर्डर हैन अफ-लेबल
शीघ्रपतन हैन अफ-लेबल
के Cymbalta वा Lexapro अधिक प्रभावी छ?
TO मेटा-विश्लेषण duloxetine एस्सिटालोप्राम र अन्य सामान्य SSRIs सँग तुलना गर्ने अध्ययन समीक्षा गरियो। अध्ययनले पत्ता लगायो कि ठूलो डिप्रेसनको उपचारको मामलामा, duloxetine असफल भयो एसएसआरआईमा उपचार सफलताको सर्तमा महत्वपूर्ण फाइदा। जे होस्, यस समीक्षाको अनुसार, बिरामीहरूले प्रतिकूल घटनाहरूको कारण डुलोक्सेटिन बन्द गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। एक सेकेन्ड मेटा-विश्लेषण यी खोजहरु लाई एको गरे। साम्बल्टा वा लेक्साप्रो डिप्रेसनको उपचारको मामलामा अरु भन्दा राम्रो छ भने यो भन्न सम्भव छैन। Cymbalta साथ साइड इफेक्ट को वृद्धि दर एक चिकित्सा छनौट गर्दा विचार गर्न महत्त्वपूर्ण कारक हुनेछ।
कभरेज र साइम्बल्टा बनाम लेक्साप्रोको लागत तुलना
सिम्बल्टा एक औषधी औषधी हो जुन सामान्यतया दुबै व्यावसायिक र मेडिकेयर औषधि योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छ। सिम्बाल्टा mg० मिलीग्रामको लागि बाहिरको जेबको मूल्य $ 300 भन्दा बढी हुन सक्छ, तर सिंगलकेयरबाट कूपनको साथ, तपाईं सहभागी फार्मेसीहरूमा १$ डलर भन्दा कममा जेनेरिक पाउन सक्नुहुन्छ।
लेक्साप्रो एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि पनि हो जुन सामान्यतया दुबै व्यवसायिक र मेडिकेयर औषधि योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छ। लेक्साप्रो १० मिलीग्रामको day० दिनको आपूर्तिको लागि बाहिरको जेबको मूल्य $ 400 को रूपमा हुन सक्छ। एकलकेयरले जेनेरिक लेक्साप्रोको लागि कुपन प्रदान गर्दछ, जुन मूल्यलाई $ १० वा कममा कम गर्न सक्दछ।
मानक खुराक ,०, mg० मिलीग्राम क्याप्सूल ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे १० डलर भन्दा कम १० डलर भन्दा कम
साइम्बाल्टा बनाम लेक्साप्रोको साझा साइड इफेक्टहरू
सिम्बाल्टा र लेक्साप्रोसँग उस्तै साइड इफेक्टहरू हुने सम्भाव्यता छ, जबकि केहि सम्भावना बढी एक वा अन्य एजेन्टको साथ हुन्छ। मतली, उदाहरणका लागि, केवल 5% लेमेक्सो ले ap% बिरामीलाई मात्र क्लिनिकल टे्रल्समा सिम्बल्टा लिने २ patients% बिरामीहरूको रिपोर्ट गरिएको थियो। जबकि मतली सधैं एक स्थायी पक्ष प्रभाव हुँदैन, यसले व्यक्तिको जीवनको गुणस्तरलाई असर गर्न सक्छ। थेरपीको पहिलो दुई हप्ताहरूमा यो अधिक हुने सम्भावना हुन्छ, र यी औषधीहरूले सामान्यतया दुईदेखि छ हप्ता सम्म जुनसुकै ठाउँमा पनि उदासीन वा चिन्ताका लक्षणहरूमा प्रभाव देखाउन सक्छ, यसका सहि लाभ भन्दा पहिले नै मतली प्रारम्भिक विच्छेदको कारण हुन सक्छ। औषधि ज्ञात छ।
सुदाफ लाई लुगा लगाउन कति समय लाग्छ?
पसीना, वा पसिना, दुई औषधि बीच समान दर मा हुन्छ। यो साइड इफेक्टले व्यक्तिको दैनिक जीवन र आत्म-सम्मानमा पनि असर गर्न सक्छ, र यो बिरामीहरूले ड्रग बन्द गर्न छनौट गरेको कारण हुन सक्छ।
निम्न सूची प्रतिकूल घटनाहरूको पूर्ण सूची हुन अभिप्रेरित छैन। सम्भावित साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि कृपया फार्मासिष्ट, डाक्टर वा अन्य मेडिकल पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
मतली हो २.%% हो %%
सुख्खा मुख हो १%% हो %%
पसिना हो %% हो %%
Dyspepsia हैन n /aहो %%
चक्कर हो %% हैन n / a
तन्द्रा हो १०% हो %%
टाउको दुखाई हो १%% हैन n / a
रक्तचाप बढ्यो हो दुई% हैन n / a
भोक कम भयो हो %% हो %%
कामवासना घटाइयो हैन n /aहो दुई%
स्रोत: सिम्बल्टा ( डेलीमेड ) लेक्साप्रो ( डेलीमेड )
साइम्बल्टा बनाम लेक्साप्रोको ड्रग अन्तर्क्रिया
Cymbalta र Lexapro प्रत्येक जिगरमा साइटोक्रोम एंजाइम प्रणाली द्वारा मेटाबोलिज हुन्छन्। सिम्बाल्टा CYP1A2 का लागि प्रमुख सब्सट्रेट, र CYP2D6 को एक मध्यम इनहिबिटर हो। यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि केही बिरामीहरू डिप्रेसन र चिन्ताका विकारको अतिरिक्त ध्यान विकारहरू पनि भोग्न सक्दछन्। ध्यान बिरामीहरू भएका धेरै बिरामीहरूलाई एम्फेटामिन्सको उपचार गरिन्छ। सिम्बाल्टाले यस CYP2D6 को अवरोधको माध्यमबाट एम्फीटामिनको सीरम एकाग्रता बढाउन सक्छ। यस संयोजन लिने बिरामीहरूलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्दछ।
लेक्साप्रो CYP2C19 र CYP3A4 को प्रमुख सब्सट्रेट, र CYP2D6 को कमजोर अवरोधक हो।
Tricyclic antidepressants, जैसे amitriptyline जस्ता लेक्साप्रोको प्रयोगले QT विस्तार र सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्छ। सामान्यतया, यस संयोजनलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ।
निम्न सूची ड्रग अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची हुन अभिप्रेत छैन। पूर्ण सूचीका लागि तपाईको प्रदायक वा फार्मासिष्टसँग परामर्श लिन उत्तम हुन्छ।
औषधि औषधि वर्ग सिम्बल्टा लेक्साप्रो
Ibrutinib एन्टिनेओप्लास्टिक्स हो हो
Oxitriptan 5HT Agonist / Triptans (एन्टिमेग्रेन एजेन्ट) हो हो
मेथेलफेनिडेट Amphetamines हो हो
रामोसेट्रन 5HT3 विरोधीहरू
(विरोधी मतली एजेंटहरू) हैन हो
एडोक्सबान एन्टीप्लेटलेट्स हो हो
Aripiprazole एन्टिसाइकोटिक हो हो
डिक्लोफेनाक Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs) हो हो
हेपेरिन एन्टिकोआगुलेन्टहरू हैन हो
Bupropion डोपामाइन / नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता हैन हो
Buspirone एन्टिन्क्सियटी हो हो
कार्बामाजेपाइन एन्टिकोनभल्सेन्ट हैन हो
एजेन्ट हैन हो
ओमेप्राजोल प्रोटोन पम्प अवरोधक हैन हो
फ्लुकोनाजोल एन्टिफंगल हैन हो
सर्टलाइन एसएसआरआईहरू हो हो
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन एमिनोक्विनोलोन / एन्टिमेलेरियल हैन हो
Linezolid एन्टिबायोटिक हो हो
मेटाक्सलोन मांसपेशी आराम गर्ने हो हो
पिमोजाइड एन्टिसाइकोटिक हैन हो
रासाजिलिन मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधक (MAOI) हो हो
सेन्ट जोन्स Wort हर्बल पूरक हो हो
मेटालाजोन थायाजाइड डायरेटिक्स हैन हो
ट्रामाडोल ओपिएट दुखाई राहत हो हो
भेन्लाफैक्सिन छनौट नोरेपाइनफ्रिन / सेरोटोनिन रिउपटेक अवरोधकर्ता (SNRIs) हो हो
Cymbalta र Lexapro को चेतावनी
सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो डिप्रेसन डिसअर्डर वा चिन्ता डिसअर्डरको लक्षणहरूको तत्काल माफी उत्पादन गर्दैन। अधिकांश पोष्ट बिरामीमा भएको कुनै परिवर्तन देख्न कम्तिमा दुई हप्ता लाग्नेछ, र औषधीको पूर्ण प्रभाव महसुस गर्न चार देखि छ हप्ता सम्म। यो महत्त्वपूर्ण छ बिरामीहरूले यसलाई बुझ्दछन् त्यसैले तिनीहरू समयमै समयमै उनीहरूको औषधी काम नगरेको विश्वासका साथ बन्द गर्दैनन्।
एमडीडी भएका बिरामीहरूले डिप्रेसन वा आत्महत्या विचारको बढ्दो अनुभव गर्न सक्दछन् वा गर्दैनन् उनीहरूले एन्टीडिप्रेसन्ट औषधीहरू लिइरहेका छन् वा छैनन्। यी सर्तहरू माफी प्राप्त नभएसम्म अझ खराब हुन सक्छ। सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो थेरापीले किशोर र युवा वयस्कहरूको बीचमा आत्महत्या गर्ने विचार र सोच बढाउन सक्छ, विशेष गरी उपचारको प्रारम्भिक चरणहरूमा कुनै पनि प्रकारको छुट पाउन अघि। यी बिरामीहरूलाई राम्ररी अनुगमन गरिनु पर्छ यदि यो उपचारलाई चिकित्सा आवश्यक मानिन्छ। लक्षणहरू अचानक देखा पर्न वा झन् खराब भएमा एक उपचार परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ।
सिम्बल्टाको साथ लि failure्ग विफलता, कहिलेकाँही घातक, रिपोर्ट आएको छ। यी केसहरू पेटको दुखाइ र उन्नत कलेजो इन्जाइमको साथ वा पीलिया बिना नै प्रस्तुत हुन सक्छ। मदिराको सेवनले यस जोखिमलाई बढाउन सक्छ, र त्यसैले यो संयोजनलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोम सबै एसएसआरआईहरू र एसएनआरआईहरूसँग रिपोर्ट गरिएको छ, साइम्बल्टा र लेक्साप्रो सहित। यो सेरोटोनिनको असामान्य उच्च स्तरसँग सम्बन्धित अवस्था हो र यसले बिरामीलाई उत्तेजित, चक्कर आउँछ र मुटुको दर बढेको महसुस गर्न सक्छ। यो सँगै दुई सेरोटोनर्जिक औषधिहरूको प्रयोग द्वारा ल्याउन सकिन्छ। यो औषधि सिफारिस गर्दा यो औषधी अन्तर्क्रियामा निर्माताको जानकारीलाई सन्दर्भ गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
सिम्बाल्टा बनाम लेक्साप्रोको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
सिम्बाल्टा एक प्रिस्क्रिप्शन एन्टीडिप्रेसस औषधि हो जुन प्रमुख डिप्रेशन, सामान्यीकृत चिन्ता विकार, र विभिन्न न्यूरोपैथिक र मस्कुलोस्केलेटल दर्द विकारहरूको उपचारमा प्रयोग गर्दछ। साइम्बल्टा मौखिक क्याप्सूलको रूपमा २० मिग्रि, mg० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्राम शक्तिमा उपलब्ध छ।
लेक्साप्रो एक प्रिस्क्रिप्शन एन्टीडिप्रेसस औषधि हो जुन प्रमुख डिप्रेशन र सामान्य चिंताको विकारको उपचारमा प्रयोग गर्दछ। लेक्साप्रो मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, र २० मिलीग्राम शक्तिमा उपलब्ध छ। यो मौखिक समाधानको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
के सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो उस्तै हो?
दुबै सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो डिप्रेसन र चिन्ताको उपचार गर्ने क्रममा तिनीहरू समान छैनन्। सिम्बल्टाले न्युरोनल सिनप्सेमा सेरोटोनिन र नोरिपाइनफ्रेन दुबैको पुनःअपटेक रोक्दछ, जबकि लेक्साप्रोले सेरोटोनिन पुनःअपटेक मात्र रोक्दछ। सिम्बल्टाले दुखाई विकारहरूको लागि थप स .्केतहरू दिन्छ।
के सिम्बाल्टा वा लेक्साप्रो राम्रो छ?
सिम्बाल्टा र लेक्साप्रो उदासिनताको उपचारमा समान प्रभावकारी देखिन्छ। बहुविध अध्ययनहरूको ठूलो मेटा-विश्लेषणहरूले संकेत गर्दछ कि साइम्बाल्टासँग प्रतिकूल घटनाहरूको उच्च दर धेरै बिरामीहरूमा लेक्साप्रोलाई पहिले प्रयास गर्ने कारण हुन सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा सिम्बल्टा वा लेक्साप्रो प्रयोग गर्न सक्छु?
खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) दुबै साइम्बाल्टा र लेक्साप्रो गर्भावस्था कोटि C मा विचार गर्दछ, यसको मतलब सुरक्षा निर्धारण गर्न पर्याप्त मानव अध्ययन गरिएको छैन। सिम्बाल्टासँग, गैर-टेराटोजेनिक प्रभावहरू नवजात शिशुहरूमा सिम्बल्टाको प्रशासन पछी अवस्थी रहेको देखिएको छ। यसमा श्वासप्रश्वासको समस्या, खुवाउने कठिनाई, र कम्पनहरू समावेश छन्। लेक्साप्रो प्रयोगको साथ, पशु अध्ययनहरूले भ्रुणमा टेराटोजेनिक प्रभावहरू देखाएका छन्, कार्डियोभास्कुलर प्रभावहरू सहित, र यो निर्धारण गरिएको छ कि यसले मानव नाललाई पार गर्छ। यी कारणहरूले गर्दा, गर्भावस्थामा सिम्बाल्टा वा लेक्साप्रोको उपयोग भ्रुणलाई सम्भावित क्षति विरूद्ध तौलनु पर्छ।
यो योजना लिन कती ढिलो भैसकेको छ
के म सिम्बल्टा वा लेक्साप्रो रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीले दुबै साइम्बाल्टा र लेक्साप्रोको विषाक्त प्रभावहरू बढाउन सक्छ। यी ड्रग्स लिँदा रक्सी पिउँदा महत्त्वपूर्ण साइकोमोटर बिरामी हुन सक्छ, र यस कारणका लागि बिरामीहरूलाई सिम्बाल्टा वा लेक्साप्रो लिईएको खण्डमा मदिराबाट बच्न सल्लाह दिइन्छ। पहिले छलफल गरिएझैं सिम्बाल्टामा रक्सीको सेवनले हेपाटिक असफलताको सम्भावना बढाउँछ।
के Cymbalta चिन्ता मा सहायता गर्छ?
सामान्यीकृत चिन्ता विकारको उपचारमा सिम्बल्टा स्वीकृत हुन्छ। बिरामीहरुलाई शिक्षित गर्नु पर्छ कि औषधिले चिन्ताका लक्षणहरु लाई तुरुन्त क्षमा प्रदान गर्दैन, र केहि बिरामीहरुलाई तीव्र चिन्ताका एपिसोडहरूको लागि थप औषधि आवश्यक पर्न सक्छ।
के Cymbalta तपाईंलाई खुशी बनाउँछ?
सिम्बाल्टाले उपलब्ध नोरपाइनफ्रिन र सेरोटोनिन बढाउँदै काम गर्दछ। यी न्युरोट्रान्समिटरहरूले मुड वा प्रभावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। सिम्बाल्टा लिने बिरामीहरूले बढी खुशी वा कम उदासिन भएको रिपोर्ट गर्न सक्दछन्, विशेष गरी चारदेखि छ हप्ता उपचार पछि।
के Cymbalta ले तपाईंको व्यक्तित्व परिवर्तन गर्दछ?
सिम्बाल्टाले मुडलाई असर पार्ने उपलब्ध नोरपाइनफ्रिन र सेरोटोनिनको मात्रा बढाउँदै जान्छ। धेरै बिरामीहरूका लागि यसले मानसिक स्वास्थ्यमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ। यदि तपाईं आफैंमा नकारात्मक परिवर्तन देख्नुहुन्छ वा साइम्बाल्टा लिँदा आत्महत्या गर्ने विचारहरू वा विचारहरू समावेश गर्दै कसैको ख्याल गर्नुहुन्छ भने तुरुन्तै मद्दत लिनुहोस्।
छोटो अवधि का स्वास्थ्य बीमा के हो?
कसरी एक मूत्र ट्र्याक संक्रमण को उपचार गर्न
के तपाइँ claritindको लागी एक नुस्खा चाहिन्छ?
कहिले सम्म पिउने पछि तपाइँ एडविल लिन सक्नुहुन्छ
राम्रो ग्लुकोज स्तर के हो?
तपाइँ एकै समयमा tylenol र एडविल लिन सक्नुहुन्छ
एडविल र tylenol सँगै साइड इफेक्ट लिँदै